दैनिक ७० लिटर दूध बेचेर मासिक साठी हजार आम्दानी – YesKathmandu.com
सोमबार १०, बैशाख २०७५
दैनिक ७० लिटर दूध बेचेर मासिक साठी हजार आम्दानी
बिहीबार २०, असोज २०७३
रामपुर (पाल्पा) । बौघापोखराथोकका टीकाराम रेश्मीले दूध बेचेर मासिक रु ६० हजार आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
दूध उत्पादनबाटै उनको परिवारको गुजारा राम्रोसँग चलेको छ । उनले विगत छ वर्षदेखि व्यावसायिक रुपमा गाई पाल्न थालेका हुन् । रेश्मीको फार्ममा अहिले होलस्टिन क्रस, जर्सी र ब्रनस्विस जातका गरी १२ वटा माउ गाई र सातवटा बाच्छाबाच्छी रहेका छन् । उनले दैनिक ७० लिटर दूध भन्दा बढी बिक्री गर्दै आएका छन् ।
करिब ११ वर्षसम्म उनले साउदी र कतारमा मजदुरी गरेका हुन् । “विदेशको कमाइले खान र बस्न मात्र ठिक्क हुन्थ्यो,” उनले भने – “कमाउन सकिएन खाली हात घर फर्किनुप¥यो ।” गाउँमा अरुले गाई पालेर दूध बिक्रीबाट मनग्य आम्दानी गरेको देखेपछि उनले गाई पाल्न सुरु गरेका हुन् ।
रेश्मीले रु १२ लाखको लगानीमा व्यवसाय सुरु गरेकी हुन् । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले गोठ सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत रु ५९ हजार, एउठटा चापकटर मेसिन र मोटर खरिदका लागि रु १० हजार सहयोग गरेको पशु विकास अधिकृत डा चन्द्रबहादुर राना बताउछन् ।
पन्ध्र माउ गाईबाट दैनिक १५० लिटर दूध उत्पादन गरी मासिक रु एक लाख बराबर आम्दानी गर्ने उहाँको लक्ष्य छ । उत्पादित दूध सदरमुकाम तानसेनमा बिक्री गरिँदै आएको छ ।
हुमिन गाविसका जीतबहादुर दर्लामी रोजगारीको खोजीमा साउदी अरब पुगे । सन्तोषजनक कमाइ नभएपछि उहाँ घर फर्किए । तर अहिले यहाँ सीप र प्रविधिको उपयोगबाट उनले मासिक रु ३० हजारभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका छन् ।
दर्लामीले अहिले फर्निचर उद्योगमा काम गरिरहनुभएको छ । यस्तै हुमिनका सन्तबहादुर नेपालीले पनि विदेशमा भन्दा दोब्बर कमाइ गर्दै आएका छन् । रुप्से गाविसमा सञ्चालित फर्निचर उद्योगमा दर्लामी र नेपालीलगायत १० जना युवालाई काम र दाम कमाउने अवसर मिलेको छ । उनीहरुले मासिक रु १५ हजार ज्यालाबापत आम्दानी गर्छन् ।
खाडीमुुलुक ताक्नुको सट्टा आफूसित भएको सीपको सदुपयोग गर्न सके गाउँघरमा नै आम्दानी गर्न सकिने दर्लामी बताउछन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार दुई नगरपालिका, ६० गाविसका करिब २०० वटा फर्निचर उद्योगमा दुई हजारभन्दा बढी युवाले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका छन् । रासस
नौ वर्षीय बालकको हत्या
वडासचिवको अत्तोपत्तो नभएपनि फेरी सर्वाेच्चका टोली कार्कीको घरमा सूचना टाँस्न जाँदै
आफ्नै ब्वायफ्रेण्डले दुई दिदीसँग यौन प्यास मेटाएपछि…
जसले आफ्नै भान्जालाई ८० हजारमा बेचे
ह्या सभामुख महोदय, यस्तो त हुँदै गर्छ नी !
आफ्नै छात्रालाइ यौन हिंसा गर्ने आरआरका प्राध्यापक पक्राउ
एक दुखद ‘फस्ट म्यारिज एनिभर्सरी’
बाबु थापाले भने ‘यसकारण गरे न्यायाधीश बमको हत्या’
विद्युत महशुल बढाउने तयारी
असुरक्षित बन्दै चन्द्रागिरी केवलकार, चालिस मिनेट बीच डाँडामै अड्कदा यात्रुहरुको कोलाहाल
चन्दाको चर्तिकलाले राजेन्द्र महत्तो चकित
युवा संघका केन्द्रीय सदस्य मल्ल पक्राउ, गुन्डा मनोज पुनका अपराधमा सहयात्री !
जाजरकोट बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या २६ पुग्यो, २८ गम्भिर घाइते
प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता र कुर्सी टिकाउन भारतसँग सम्झौता गरेका हुन्–डा.बाबुराम भट्टराई
सरकार गोजीको रुमाल हो र भन्ने वित्तिकै प्रचण्डलाई दिन ? : ईश्वर पोखरेल
‘कसैको दवाबमा परेर संविधानविरुद्ध काम गर्दिन’- राष्ट्रपति
माग पूरा नभएसम्म महिलाको शव जिम्मा नलिने
कांग्रेसका उम्मेदवार र नगरप्रमूखको घरजग्गा विप्लव माओवादीको नियन्त्रणमा
मुख्यमन्त्री चयनको जिम्मेवारी प्रदेशसभालाई दिने एमालेको निर्णय
पार्टी एकतालाई अन्तिम रुप दिन संयोजन समितिको बैठक बस्दै
टेलिकमले ल्यायो नयाँ सुविधा,ल्याण्डलाइन टेलिफोनको पाँच सेवा नि:शुल्क
प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रीहरुसँग आकस्मिक छलफलमा
नेप्से लगातार ओरालो
संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्नै पर्छ: विजुक्छे
देउवा र सिटौलाको गोप्य प्लान,रामचन्द्र पौडेल यता पनि ‘ट्वा’